The Irrawaddy's Blog: "ဒီအရေးအခင်းမှာ ဦးအံ့မောင်ကတော့ တရားခံပဲ"
"ဒီအရေးအခင်းမှာ ဦးအံ့မောင်ကတော့ တရားခံပဲ"
သန္တိသုခအရေးနဲ့ ၀န်ကြီး ဦးဆန်းဆင့် ဖြုတ်ခံရမှု အပေါ် ဦးဝီရသူရဲ့ အမြင်ကို ဧရာဝတီ မြန်မာပိုင်း ပင်မ စာမျက်နှာမှာ တနင်္လာနေ့က တင်ခဲ့ပါတယ်။ မဖတ်ရသေးသူများအတွက် ပြန်လည် ကောက်နုတ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပီနန် ဆရာတော်ကြီး ဦးပညာဝံသ နှင့် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့တို့ အကြား ပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွား လျက် ရှိသော မဟာသန္တိသုခ ကျောင်းတော်ကြီးကို ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့၊ ညပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်း သာသနာ ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တို့က ၀င်ရောက်စီးနင်းချိတ်ပိတ်ခဲ့ပြီး သာသနာ ညှိုးနွမ်းစေမှုဖြင့် ကျောင်းတိုက် တွင် နေထိုင် သော ပီနန် ဆရာတော် ဦးပညာဝံသ၏ တပည့်ရင်း သံဃာတော် ၅ ပါး ကို ဖမ်းဆီး လူဝတ်လဲခဲ့သည်။
ဇွန် ၂၀ ရက်နေ့တွင် တာမွေမြို့နယ် တရားရုံးတွင် အမှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ဖမ်းဆီးခံ ဆရာတော်များကို အာမခံဖြင့် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ဦးဆန်းဆင့် ရုတ်တရက် ဖမ်းဆီးခံရခြင်း၊ ၀န်ကြီးရာထူး ဖြုတ်ခံရခြင်း၊ ဦးအံ့မောင်ကို ခေါ်ယူမေးမြန်းခြင်းဆိုသော နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တွဲ ဖြစ်ရပ် အများအပြား ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိရာ ဧရာဝတီအကြီးတန်းသတင်းထောက် စနေလင်းက မန္တလေး မစိုးရိမ် တိုက်သစ် ဆရာတော် ဦးဝီရသူ၏ အမြင်များ မေးမြန်း ထားပါသည်။
မေး။ ။ အခုလို သန္တိသုခကျောင်းတိုက်က သံဃာ ၅ ပါးကို ဖမ်းဆီး တရားရုံးတင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆရာတော်အမြင် သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ အဓိက ပြောရမှာက အာဏာရှင်လက်ထက်တုန်းက သံဃာတော်တွေကို နှိပ်ကွပ်ဖို့ ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ မတရားသော ညွှန်ကြားလွှာ တွေရှိတယ်။ အဲဒီညွှန်ကြားလွှာတွေက အခုချိန်ထိ အသက်ဝင်နေတုန်းပဲ။ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့ဝင် ဆရာတော် တပါးပါးက မကျေနပ်ဘူးဆိုရင် အဲဒီညွှန်ကြားလွှာနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ အဲတော့ သန္တိသုခ အရေးတော် ပုံမှာ ဒီညွှန်ကြားလွှာကို ကိုင်ပြီးတော့ အခုလို အရေးယူတာဖြစ်တယ်။ တကယ်တမ်းမှာ အစိုးရက အရေး ယူခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက က ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အရေးယူလိုက်တာ။ အဲဒီ ၂၀/၉၀ ညွှန်ကြားချက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင် ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးပြီး ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဥပဒေဖြစ်တယ်။ အဲဒီဥပဒေထဲမှာ တိုင်းဒေသကြီး၊ သာသနာရေးအဖွဲ့က တရားလိုလုပ်ပြီးတော့ တရားစွဲရမယ်လို့ ပါတယ်။ အဲဒီ ဥပဒေကြီးနဲ့ ကိုင်လိုက်တာ။
မေး။ ။ အရေးယူခံနေရတဲ့ ဆရာတော်တွေဆိုရင် သင်္ကန်းဝတ်ကြီးနဲ့ တရားရင်ဆိုင်ရမယ့် အနေအထားဖြစ်နေတယ်။
ဖြေ။ ။ မှန်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ကသာ ဒီအမှုကို ပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင် တရားလို လုပ်ထားတဲ့ တိုင်းဒေသကြီးအဖွဲ့က ချက်ချင်း သင်္ကန်းဝတ်ပေးဖို့ စီစဉ်နေတယ်။ သို့သော် နိုင်ငံတော် သံဃ မဟာနာယက အဖွဲ့က ဆရာ တော်တွေက ဒီလိုသာ ပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ရင် နောက်အမှုတွေမှာလည်း ဒီလိုပြန်ရုတ်သိမ်းနေရမှာပဲ။ အဲဒီတော့ သူတို့ဘက် က မရုပ်သိမ်းနိုင်ဘူး။ သို့သော် တရားရုံးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သူတို့တွေက ကန့်ကွက်ဖို့မရှိပါဘူး။ တရားရုံးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်း သဘောတူပါတယ်လို့ ဆရာတော်ကြီးတွေက ထပ်မံညွှန်ကြားထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အခုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ နဲ့ တရားရေး ဌာနနဲ့ ညှိပြီးတော့ အာမခံရအောင် လုပ်ပေးလိုက်တယ်။
မေး။ ။ ဒီဖြစ်စဉ်တခုလုံးမှာ မဟနရဲ့ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုက ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ ရှိမလဲ။ ကျောင်းသိမ်း တဲ့ကိစ္စ ရော၊ အရေးယူတဲ့ကိစ္စမှာရောပေါ့။
ဖြေ။ ။ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုတော့ မဟုတ်တော့ဘူး။ သူ့ရဲ့နယ်ပယ်ဖြစ်နေတာကိုး။ တကယ်တမ်းကျတော့ နည်းလမ်း မကျသော အရေးယူမှုလို ဖြစ်နေတယ်။ သံဃာကို အင်အားသုံးပြီးတော့ ဖယ်ရှားတာ၊ ဖမ်းဆီးတာပေါ့။ အဓိက ဒီအရေးအခင်းမှာ ဦးအံ့မောင်ကတော့ တရားခံပဲ။ သူက နှစ်ပေါင်းများစွာလည်း ဒီနေရာမှာ အလုပ် လုပ်လာတဲ့သူ၊
သန္တိသုခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တော်တော်လေးလည်း မက်လောက်အောင် ရထားတဲ့သူ။ လက်လွတ်သွားမယ် ဆိုရင်လည်း ဆုံးရှုံးမှာတွေက အများကြီးလေ။ ပြီးတော့ စာရင်းစစ်တွေ ၀င်ရင်လည်း သူ့ကိုထိမှာ။ အဲဒီတော့ လုံးဝ အထိမခံဘဲ ဆရာတော် တွေကို ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ရင်းနဲ့ တအားကိုကြီးသွားတာ။
မေး။ ။ သာသနာရေး ၀န်ကြီး ဦးဆန်းဆင့် တာဝန်က ရပ်စဲခြင်းခံရတဲ့အပြင် အရေးယူခြင်းလည်းခံရတယ်ဆိုတော့ အဲဒီအပေါ်မှာ ဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲ။
ဖြေ။ ။ ဦးဇင်းတို့ ပစ်တာက ဦးအံ့မောင်၊ သို့သော် ဦးအံ့မောင်က လူလည်ဆိုတော့ သူတော်ကောင်းကို အကာအကွယ် ယူနိုင်တာပေါ့။ သူ့ကိုမထိဘဲနဲ့ သူက ဆွဲပြီးခေါ်လိုက်တဲ့ ဦးဆန်းဆင့်ကို ထိသွားတယ်။
မေး။ ။ သမ္မတက သာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ၀န်ကြီးတပါးကို ဒီလိုအရေးယူတယ်ဆိုတာက နိုင်ငံရေးအရ ထိုးကျွေး ကစားတဲ့ နိုင်ငံရေးကစားကွက် သဘောမျိုးရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
ဖြေ။ ။ ဦးဇင်းတို့ကတော့ အဲဒီလိုမမြင်ဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ၀န်ကြီးက ၀န်ထမ်းကောင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းမှာလုပ်တုန်းကလည်း ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကို ရတယ်။ သာသနာရေးဌာနမှာလည်း သံဃာတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရတယ်။ တကယ် ထိုးကျွေးမယ်ဆိုရင်တော့ ၀န်ထမ်းဆိုးကို ထိုးကျွေးမှာပေါ့။ ၀န်ထမ်းကောင်းကို ထိုးမကျွေးပါဘူး။
မေး။ ။ ဒါဆိုရင် ဦးဆန်းဆင့်ကို တာဝန်မှရပ်စဲတဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုအကြောင်းတွေ ရှိမယ်ထင်လဲ။
ဖြေ။ ။ ဒီဥစ္စာက ဦးအံ့မောင်ကို နိုင်အောင် မထိန်းနိုင်လို့ပဲ။ ဦးအံ့မောင်ရဲ့အစီအမံတွေနဲ့ နည်းလမ်းမမှန်မကန် ဆောင်ရွက်မှု တွေ မှာ တာဝန်ခံပြီးအရေးယူခံရတယ်လို့ မြင်တယ်။
မေး။ ။ အမျိုးဘာသာ သာသနာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အစည်းအဝေး ( မဘသ ) မှာ သန္တိသုခအရေးနဲ့ ဆွေးနွေး တာမျိုး ရော ရှိလား။
ဖြေ။ ။ မဘသရဲ့ အဖွဲ့ကြီးက အမျိုးသားရေး တခုထဲကိုလုပ်ဖို့ ဖွဲ့စည်း ထားတာ။ အချင်းချင်း အငြင်းပွားတဲ့ ကိစ္စတွေကို လုံးဝလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် မဘသအနေနဲ့ သန္တိသုခကိစ္စမှာ ကြေညာချက်မျိုး မထွက်လာတာပေါ့။ မဘသ အမည်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကန့်ကွက်မယ်။
Posted in: အင်တာဗျူး , အမြင်
ဦအံ့မောင် မပြုတ် သရွေ ဒီလိုဖြစ် ရပ်မျိုးတွေထပ်ဖြစ်လာမှာပဲ
all he has said is ' vague' . Not specific.
if he knows more, he should say more.
He, himself is also dangerous to Myanmar .
What he has done is also dangerous.
But what he has done is ' not related ' to this event.
separate issues. separate problems.
But want to say . U Wirathu is notasuitable monk to participate in that organization . which is risky rather than benefit.
အမျိုး ဘာသာ သာသနာ လို့ ခေါင်းစဉ်ကြီးတပ်ထားပြီး သာသနာတော်နဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင် နေတဲ့ လယ်တီသိမ် ဖျက်ဆီးပစ်တဲ့ကိစ္စ ခုလည်း သန္တိသုခ မှာ သံဃာတွေကို အချိန်မတော် သူပူလို ၀င်စီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာ နှုတ်ဆိတ်နေတယ် ဆိုရင်တော့ ဘာသာ သာသနာဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အတွက် စဉ်းစားရတော့မယ်။